ဆင်းရဲပြီး အသိပညာ နည်းပါးတဲ့ သူတွေ ကိုမှ ပစ်မှတ်ထားပြီး လိမ်နေတဲ့ လူလိမ် ငွေချေးလုပ်ငန်းများ – News & Media
တနေ့ က ခလေးမ ၁ ယောက် ကျနော့ဆိုင် ကို ရောက်လာပြီး ငွေ ၅သောင်း တိတိကို wave money နဲ့ လွှဲခိုင်း တယ် ။ လွှဲရမယ့် နံပါတ်က MYTEL…. ရုပ်ရည်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး စီးပွားရေးသိပ် အဆင်မပြေတဲ့ပုံစံ သူက ကျနော့ကိုသာ ငွေလွှဲခိုင်းနေတာ သူ့လက်နဲ့ မျက်စိတွေကသူ့ရဲ့ အညံ့စားဖုန်းလေး ပေါ်မှာ ကီးဘုတ်တွေနှိပ်နေတာမို့ ကျနော့ စိတ်ထဲ မသင်္ကာဖြစ်သွား မိတယ် ။
ဒါနဲ့ သူ့ဖုန်းကို တစ်ချက် လှမ်းကြည့်မိတော့ ငွေစုငွေချေး တဲ့ ကျနော် အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ် သွားမိတယ်။ ကျနော် ငွေကိုမလွှဲသေးဘဲသူနဲ့ စကားစမြည် ပြောကြည့်လိုက်တော့ သူ့ ဘက်က ငွေ ၅သေါင်း တိတိ ကို wave money နဲ့ စဘော်သဘောမျိုး အရင် သွင်းပေးရမယ်။ သူ့ပိုက်ဆံ ဝင်ပြီ ဆိုမှ ဂရု မှ ငွေ ၅သိန်း ပြန်လို့ ချေးပေးမယ်။
သူ့ပြောပုံအရ အတော်လေး အားတက်စရာ။ ခလေးမဘက်က လောဘတက်နေပြီမို့ ငွေ ကို အမြန်ဆုံးလွှဲပေးဖို့ ပက်စဝက် ကို 123456 ထားပေးဖို့ကျနော့ ကို ပြောလာတာကြောင့် သူ့စိတ်ကျေနပ်ပါစေဆိုပြီး ကျနော် လွှဲပေး လိုက်တယ်။ တစ်ခုဘဲ အဲဒါကသူပေးတဲ့ ပက်စဝက် မဟုတ်ဘဲ ကျနော့ စိတ်ကြိုက် ပက်စဝက်ကို ချိန်းလို့ ပေးလိုက်တယ်။ ဟိုဂရု အက်ထမိန်ကြီးက ငွေပို့တဲ့ မက်ဆေ့ဖ် ကို ရတာနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီး ပက်စဝက်တောင်းတာ တွေ့ရတယ်။
ခလေးမ က သူပေးထားတဲ့ ပက်စဝက်ကို အက်ထမိန်ကြီးဆီ လှမ်းပေးလိုက်တော့ ဖုန်းချ သွားတာသိပ်မကြာဘူးပြန်ခေါ်ပြီး ပက်စဝက် မှားနေလို့ ထုတ်မရဘူး တဲ့…ဒါနဲ့ဘဲ… ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့လို့ သူ့ ဘက် က ငွေ ၅သိန်းကို ပြန်လွှဲပြီးမှ ပက်စဝက် ကို ပေးနိုင်မယ်လို့ ကြားက ဝင်ပြောလိုက်တော့ ဖုန်းကို ချပြီး ဘလော့ဂ်သွားလေရဲ့….
ဒါတောင်.. ခလေးမလေးက ကျနော့ကို မေးသေးတယ်။ “”ဦးလေး… သူတို့.. လိမ်နေတာလားဟင်”’…တဲ့ လိမ်ချင်လိမ် မလိမ်ချင်နေ နင်လွှဲတဲ့ ပိုက်ဆံ နင်ပြန်ထုတ်သွား ခု နေထုတ်ရင် လွှဲခ ၁ထောင် နင်ရှုံးမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ… နင့်အနေနဲ့ မမြင်ရတဲ့ ၅သိန်း နောက်ကို ဆက်လိုက်ရင်တော့ ၅၁၀၀၀ ရှုံးမယ်လို့ ပြောလိုက်တော့မှ “သမီး ငွေကိုပြန်ထုတ်ပြီးယူတော့မယ်ဦးလေးရယ်” ဖြစ်သွားတော့တယ်ဗျာ….
အလိုကြီးအရနည်းတတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မို့ အွန်လိုင်းပါး မဝကြသေးတဲ့ လူငယ်မောင်မယ်များ သတိထားကြစေဖို့ ကျနော် ပြောပြလိုက်ရုံသာ။ လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။
sithu ag ၊ Min Ma Kha ပို့စ်မှပြန်လည်မျှဎေပါသည်။
တနေ့ က ခလေးမ ၁ ယောကျ ကနြော့ဆိုငျ ကို ရောကျလာပွီး ငှေ ၅သောငျး တိတိကို wave money နဲ့ လှဲခိုငျး တယျ ။ လှဲရမယျ့ နံပါတျက MYTEL…. ရုပျရညျကို ကွညျ့လိုကျတော့ ငယျငယျ ရှယျရှယျ နဲ့ အိမျထောငျကပြွီး စီးပှားရေးသိပျ အဆငျမပွတေဲ့ပုံစံ သူက ကနြော့ကိုသာ ငှလှေဲခိုငျးနတော သူ့လကျနဲ့ မကျြစိတှကေသူ့ရဲ့ အညံ့စားဖုနျးလေး ပျေါမှာ ကီးဘုတျတှနှေိပျနတောမို့ ကနြော့ စိတျထဲ မသင်ျကာဖွဈသှား မိတယျ ။
ဒါနဲ့ သူ့ဖုနျးကို တဈခကျြ လှမျးကွညျ့မိတော့ ငှစေုငှခြေေး တဲ့ ကနြျော အတျောလေးစိတျမကောငျးဖွဈ သှားမိတယျ။ ကနြျော ငှကေိုမလှဲသေးဘဲသူနဲ့ စကားစမွညျ ပွောကွညျ့လိုကျတော့ သူ့ ဘကျက ငှေ ၅သေါငျး တိတိ ကို wave money နဲ့ စဘျောသဘောမြိုး အရငျ သှငျးပေးရမယျ။ သူ့ပိုကျဆံ ဝငျပွီ ဆိုမှ ဂရု မှ ငှေ ၅သိနျး ပွနျလို့ ခြေးပေးမယျ။
သူ့ပွောပုံအရ အတျောလေး အားတကျစရာ။ ခလေးမဘကျက လောဘတကျနပွေီမို့ ငှေ ကို အမွနျဆုံးလှဲပေးဖို့ ပကျစဝကျ ကို 123456 ထားပေးဖို့ကနြော့ ကို ပွောလာတာကွောငျ့ သူ့စိတျကနြေပျပါစဆေိုပွီး ကနြျော လှဲပေး လိုကျတယျ။ တဈခုဘဲ အဲဒါကသူပေးတဲ့ ပကျစဝကျ မဟုတျဘဲ ကနြော့ စိတျကွိုကျ ပကျစဝကျကို ခြိနျးလို့ ပေးလိုကျတယျ။ ဟိုဂရု အကျထမိနျကွီးက ငှပေို့တဲ့ မကျဆဖျေ့ ကို ရတာနဲ့ ဖုနျးဆကျပွီး ပကျစဝကျတောငျးတာ တှရေ့တယျ။
ခလေးမ က သူပေးထားတဲ့ ပကျစဝကျကို အကျထမိနျကွီးဆီ လှမျးပေးလိုကျတော့ ဖုနျးခြ သှားတာသိပျမကွာဘူးပွနျချေါပွီး ပကျစဝကျ မှားနလေို့ ထုတျမရဘူး တဲ့…ဒါနဲ့ဘဲ… ကနြျောလညျး မနနေိုငျတော့လို့ သူ့ ဘကျ က ငှေ ၅သိနျးကို ပွနျလှဲပွီးမှ ပကျစဝကျ ကို ပေးနိုငျမယျလို့ ကွားက ဝငျပွောလိုကျတော့ ဖုနျးကို ခပြွီး ဘလော့ဂျသှားလရေဲ့….
ဒါတောငျ.. ခလေးမလေးက ကနြော့ကို မေးသေးတယျ။ “”ဦးလေး… သူတို့.. လိမျနတောလားဟငျ”’…တဲ့ လိမျခငျြလိမျ မလိမျခငျြနေ နငျလှဲတဲ့ ပိုကျဆံ နငျပွနျထုတျသှား ခု နထေုတျရငျ လှဲခ ၁ထောငျ နငျရှုံးမယျ။ ဒီလိုမှ မဟုတျဘဲ… နငျ့အနနေဲ့ မမွငျရတဲ့ ၅သိနျး နောကျကို ဆကျလိုကျရငျတော့ ၅၁၀၀၀ ရှုံးမယျလို့ ပွောလိုကျတော့မှ “သမီး ငှကေိုပွနျထုတျပွီးယူတော့မယျဦးလေးရယျ” ဖွဈသှားတော့တယျဗြာ….
အလိုကွီးအရနညျးတတျတဲ့ ဖွဈရပျမို့ အှနျလိုငျးပါး မဝကွသေးတဲ့ လူငယျမောငျမယျမြား သတိထားကွစဖေို့ ကနြျော ပွောပွလိုကျရုံသာ။ လူအခငျြးခငျြးလှညျ့ပတျခွငျးကငျးရှငျးကွပါစေ။
sithu ag ၊ Min Ma Kha ပို့ဈမှပွနျလညျမြှဎပေါသညျ။